Abavelisi beemveliso-abaThengisi baseChina abaThengi, abaFektri
I-YIHOO PA (i-polyamide) yokulungisa kunye nezongezo zohlengahlengiso
I-Polyamide (ekwabizwa ngokuba yi-PA okanye iNylon) ngamagama aqhelekileyo e-resin ye-thermoplastic resin, equlathe iqela eliphindaphindwayo le-amide kwikhonkco eliphambili leemolekyuli. I-PA ibandakanya i-aliphatic PA, i-aliphatic - i-PA enamakha kunye ne-PA enamakha, apho i-aliphatic PA, ethathwe kwinani lee-athomu zekhabhon kwi-monomer eyenziweyo, ineentlobo ezininzi, inamandla kakhulu kunye nokusetyenziswa okubanzi.
Ngokwenza kwemoto iimoto, ukusebenza okuphezulu kwezixhobo zombane kunye nezombane, kunye nokukhawulezisa kwenkqubo elula yobunzima boomatshini, imfuno yenayiloni iya kuba phezulu nangaphezulu. Iziphene ze-nylon nazo zibalulekile ekuthinteleni ukusetyenziswa kwayo, ngakumbi i-PA6 kunye ne-PA66, xa kuthelekiswa neentlobo ze-PA46, PA12, zinexabiso elihle, nangona intsebenzo ingafikeleli kwiimfuno zophuhliso lwamashishini ahambelana noko.
Iiplastiki ezinogwebu yenye yeendidi eziphambili zezinto zokwenziwa kwe-polyurethane, ezinophawu lwe-porosity, ke ubukhulu bayo buncinci, kwaye amandla ayo aphezulu aphezulu. Ngokutsho izinto ezahlukeneyo ekrwada kunye ifomula, oko kunokwenziwa ezithambileyo, semi-ngqongqo kwaye ngqongqo lyu amagwebu zeplastiki njl.
I-foam ye-PU isetyenziswa ngokubanzi, iphantse yangena kuwo onke amacandelo oqoqosho lwesizwe, ngakumbi ifanitshala, izinto zokulala, ezothutho, ifriji, ulwakhiwo, ubushushu kunye nezinye izinto ezininzi.
IPolycarbonate (PC) yipolymer equlathe iqela lekhabhonathi kwityathanga leemolekyuli. Ngokwesakhiwo seqela le-ester, lungohlulwa lube zi-aliphatic, aromatic, aliphatic - aromatic kunye nezinye iintlobo. Iipropathi zoomatshini ezisezantsi ze-aliphatic kunye ne-aliphatic enamakha i-polycarbonate yokunciphisa isicelo sabo kwiiplastiki zobunjineli. Kuphela yipolycarbonate enamakha kuphela eveliswe kwimizi-mveliso. Ngenxa yobuninzi besakhiwo se-polycarbonate, i-PC iye yaba ziiplastikhi zobunjineli ngokubanzi ezinelona zinga lokukhula ngokukhawuleza phakathi kweeplastiki zenjineli ezintlanu.
I-PC ayimelani nokukhanya kwe-ultraviolet, i-alkali eyomeleleyo, kunye nokukrwela. Ijika tyheli kunye nokuvezwa kwexesha elide kwi-ultraviolet. Ke ngoko, isidingo sezongezo eziguqulweyo kubalulekile.
YIHOO TPU elastomer (Thermoplastic polyurethane elastomer) izongezo
I-Thermoplastic polyurethane elastomer (TPU), eneempawu zayo ezigqwesileyo kunye nokusetyenziswa kwayo ngokubanzi, iye yaba yenye yezinto ezibalulekileyo ze-elastomer ye-thermoplastic, eneemolekyuli zazo ezisemgceni ngokuhamba kancinci okanye zingenakucanda kwemichiza.
Zininzi izinto ezinqamlezileyo zomzimba ezenziwe ngamabhanti e-hydrogen phakathi kweetyathingi zemigca ye-polyurethane, edlala indima ekomelezayo kwi-morphology yazo, oko ke kunika iipropathi ezininzi ezigqwesileyo, ezinje ngeemodyuli eziphezulu, amandla aphezulu, ukumelana nokunxiba okuhle, ukumelana nemichiza, ukumelana ne-hydrolysis, phezulu kunye ukumelana nobushushu obuphantsi kunye nokumelana nokungunda. Ezi ndawo zibalaseleyo zenza i-thermoplastic polyurethane isetyenziswe ngokubanzi kumacandelo amaninzi njengezihlangu, intambo, iimpahla, imoto, amayeza kunye nempilo, umbhobho, ifilimu kunye nephepha.
Kwiminyaka yakutshanje, ngokumiliselwa kwemigaqo yomoya esemotweni, umgangatho wolawulo lweemoto kunye ne-VOC (inqanaba le-Organic Compounds) libe yinxalenye ebalulekileyo yovavanyo lomgangatho wemoto. I-VOC ngumyalelo weekhompawundi eziphilayo, ubukhulu becala ibhekisa kwikhabhathi yezithuthi kunye nakwizinto zecandelo lezinto eziphathekayo, ikakhulu kubandakanya uthotho lwe-benzene, i-aldehydes kunye neetoni kunye ne-undecane, i-acyl butyl, i-phthalates njalo njalo.
Xa uxinzelelo lwe-VOC kwisithuthi lufikelela kwinqanaba elithile, oko kuya kubangela iimpawu ezinjengentloko, isicaphucaphu, ukugabha nokudinwa, kwaye kungade kubangele ukuxhuzula kunye nesiqa kwiimeko ezinzulu. Iya konakalisa isibindi, izintso, ingqondo kunye ne-nervous system, okukhokelela ekulahlekelweni kwememori kunye nezinye iziphumo ezibi, eziyingozi kwimpilo yabantu.
Iarhente yokugqibezela impahla: Ngenxa yokuba kukho iintlobo ezahlukeneyo, kucetyiswa ukuba ukhethe uhlobo oluchanekileyo ngokweemfuno kunye namabakala okugqitywa kweekhemikhali. Ngexesha lokuqhubekeka, iarhente yokugqiba ezantsi esona sisombululo sisisombululo, ngelixa iarhente ephezulu yokugqiba iyinto enkulu emulsion. Kunye nearhente yokugqiba, i-UV yokufunxa, ukukhawulezisa umbala ukukhawulezisa iarhente kunye nezinye izinto ezincedisayo ziyacelwa ngexesha lokuvelisa.
Iipolymers ziye zaba yinto eyimfuneko phantse kuwo onke amabakala obomi banamhlanje, kwaye inkqubela phambili yakutshanje kwimveliso kunye nasekuqhubekeni kwazo ikwandisile ukusetyenziswa kweeplastikhi, kwaye kwezinye izicelo, iipolymers ziye zatshintsha ezinye izinto ezinje ngeglasi, isinyithi, iphepha kunye neenkuni.
Phantsi kweemeko ezizodwa, ukutyabeka kunye nepeyinti ezinje ngepeyinti yangaphandle, ipeyinti, ipeyinti yemoto, inokukhawulezisa inkqubo yokuguga, emva kokuvezwa kwexesha elide kwimitha ye-ultraviolet, ukuguga okukhanyayo, ioksijini eshushu.
Eyona ndlela isebenzayo yokuphucula inqanaba lokumelana nemozulu yokutyabeka kukongeza i-antioxidant kunye nokukhanya okuzinzisayo, okunokuthi kuthintele i-radicals yasimahla kwi-resin yeplastiki, ukubola kwe-hydrogen peroxide, kunye nokubamba ii-radicals zasimahla, ukulungiselela ukubonelela ngokhuseleko oluhlala ixesha elide nentlaka zeplastiki, kwaye ukulibaziseka kakhulu ilahleko isilungiseleli segolide, tyheli kunye pulverization ukutyabeka.
Umzi-mveliso wethu okwiLinyi, kwiphondo laseShandong, unokubonelela ngezantsi kwe-API kunye nabaphakathi